Maxaad Ka Xasuusataa Mujaahidad SAFIYA XAASHI MADAR? | Maalmahanews
Maxaad Ka Xasuusataa Mujaahidad SAFIYA XAASHI MADAR?
Hargeisa-(Maalmaha):- Mujaahidad Safiya Xaashi Madar, Waxay kaalin weyn oo muuqata ka soo qaadatay, halgankii dib loogu xoraynaayey Somaliland. Iyadoo samaysay, siddeetanaadkii, koox dhalin yaro ah, oo isku xidhan, oo abaabulan,kuwaas oo ku noolaa, magaalada Hargeysa, qayb weyna ka qaadan jiray, hawlaha Snm, waddanka ama Hargeysa gudaheeda ka fulinayso, iyo saarista iyo taakulaynta dhalinyarada iyo dadka ku biiraya,mujaahidiinta SNM.
Mujaahidad Saf…iya Xaashi Madar, iyo dhalinyaradii kaleba waa la qabqabtay, 1985-kii, Qabashadaas ka dib, badhkoodna, dil ayaa lagu xukumay, qaar ay Safiya Xaashi, ku jirtana xabsi Daa’in ayaa lagu xukumay.
Mujaahidad Safiya Xaashi, maalintaas la qabanaayo, uur sagaal bilooda ayay lahayd, Dawladdii markaas jirtayna, gabadhaas xaamiladaa wax naxariisa umay gelin. Saddex cisho ka dib ayay Safiya Xaashi, jeelkii ku dhex umushay, wiil, ay u bixisay Cabdi.
Mujaahidad Safiya Xaashi, dhibaatada gaadhay, xiligaasi, waxay keentay in hayda Amnesty International, ay aad ugu doodo, si loo sii daayo, markii danbena ummad baddan oo aduunka ku nool oo gaal iyo muslimba leh, ayaa u kacay in gabadhaas xabsiga laga sii daayo. Waxaana dhacday, in ololihii ugu weynaa, ay dadkaas Safiya u doodayaa, ay qaadeen, maalintii Haweenka aduunka oo ku beegnayd maanta oo kale 08.March.1989, Dadkaas oo kumanaan warqadood oo codsiyo ah, usoo diray, dawladdii Soomaaliya xiligaas ka talineysey, Taasina waxay keentay in Maxamed Siyad Barre, gabadhan shacbiyadeeda iyo halqiga u doodaya uu ka yaabo, cadaadiskii badnaa ka dibna, uu jeelka ka soo saaro, kulana kulmo madaxtooyadiisii, isagoo sidaas cafis ugu fidiyay oo ku siidaayay, Safiya Xaashi Madar.
Hablihii kale ee lala xukumay, Safiya Xaashi Madar, waxaa ka mid ahaa Mujaahidad Fahima Daahir oo xabsi daa’in ahayd iyana,, iyo Mujaahidad Umayma Axmed,oo 7 sanno oo xabsiya lagu xukumay.
Waxaana baxsatay oo aan la qaban Mujaahidad Naciima Muxumed .
Maadaama maanta ay maalintii dumarka tahay, ee 08.March. waxaynu ku xasuusanaynaa, haweenkii halganka qaybta weyn ka soo qaatay, iyo haweenkii ragooda iyo caruurtooda hawdka kula jiray ee iyana qaybta weyn ka geystey taageerada, iyo taakulaynta, ragoodii halganka ku jiray, iyo korinta caruurtoodii,